आयना विलियम्स - पत्याउनु हुन्छ? - साप्ताहिक
संसारमा सबैभन्दा लामो नङ कसको होला ? ६० वर्षीया आयना विलियम्सको । ५ सय ७६ दशमलव ४ सेन्टिमटर लामो नङ भएकी आयना गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएकी छिन् । लामा नङ नभाँचिउन् भनेर उनी भाँडा माझ्ने, कपडा धुनेजस्ता कामबाट परै बस्छिन् । हात धुँदा सधैँ एन्टिब्याक्टिेरियल साबुन प्रयोग गर्छिन् र ब्रसले दैनिक नङ सफा गर्छिन् । आयना लामा नङले ट्राउजर लगाउन र फुकाल्न बाहेक अरू कुरामा अफ्ठ्यारो नहुने कुरा बताउँछिन् ।
सबैभन्दा पुराना बडिबिल्डर
जिम एरिङ्टन सबैभन्दा पुराना बडी बिल्डर हुन् । ८५ वर्ष नाघेका जिम स्किनिबोन्स नामले समेत चिनिन्छन् । भेनिस, क्यालिफोर्नियाका जिम विगत ७० वर्षदेखि बडी बिल्डिङमा सक्रिय छन् । निरन्तर मेहनतका कारण उनले हालसम्म ६२ वटा प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गरिसकेका छन् ।
ठूलो गाँस खाने व्यक्ति
संसारमा सबैभन्दा ठूलो गाँस खाने व्यक्तिका रूपमा जर्मनीका बर्न स्किमिडिट्ले नाम लेखाएका छन् । सन् २०१५ मा उनका छोराले गिनिज बुक देखाउँदै यस्तो पनि रेकर्ड हुन्छ भनेका थिए । त्यसपछि बर्नले आफ्नो तयारी थाले । बर्नले मुखमा ३ दशमलव ५ इन्चको ग्याप राखेर यो कीर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
युएस ओपन जित्ने दोस्रो एसियाली महिला
सारापोभा अझै बढी कमाउने